VaMadiro Vopomerwa Mhosva yeKuba Mombe dze Bhavhudhe raVaMugabe
MUTARE — Vaimbove sachigaro we Zanu-PF mu Manicaland VaMike Madiro na sachigaro wezvemadzimai mudunhu iri, Amai Dorothy Mabika neMuvhuro vakamiswa pamberi pedare ramejasitiriti Amai Lucy Anne Mungwari maMutare vachipomerwa mhosva yekuba mombe dzepabhavhudhe remutungamiriri webato ravo VaRobert Mugabe.
Amai Mungwari vakabvumira kuti VaMadiro naAmai Mabika vabvise mari yechibatiso inoita zana nemakumi mashanu emabhora pamunhu kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba.
Vaviri ava vachadzoka kudare zvakare musi wa 22 Kubvumbi apo mhosva yavakatarisana nayo ichatanga kutongwa. Vari kupomerwa mhosva yekutsakatitsa mombe gumi dzainge dzapiwa sangano re-21st February Movement, rinoronga nezvebhavadheyi ravamugabe gore roga roga.
Mombe idzi dzainge vadzapihwa nenhengo yeZanu-PF VaJohn Chirimabowa kuti dzizosvitswa kuna VaMugabe. Vaviri ava avo vange vakamirirwa negweta ravo VaTinofara Hove havana kupiwa mukana wekubvuma kana kuramba mhosva yavakatarisana nayo.
Muchuchisi wehurumende muzvare Jane Rose Matsikidze vaudza dare kuti mhosva iyi yakaparwa mugore ra 2012.
VaMadiro avo vane makore makumi mana nemapfumbamwe ekuberekwa pamwechete naAmai Mabika vane makore makumi mana nemanomwe vanonzi vakaba mombe gumi izvo zvakazopa kuti vasungwe. Mombe idzi dzainge dzabva papurazi nhamba 39 reku Middle Sabi, kuChipinge.
Vachuchisi vehurumende vazivisa dare kuti vachadana zvapupu zvine chitsama zvinosanganisira munyori anoona nezvemabasa muZanu-PF VaDidymus Mutasa, sachigaro wezvevechidiki mubato iri, VaAbsolom Sikhosana, mukuru wenhepfenuro ye ZI-FM VaSupa Mandiwanzira nevamwewo.
Vaviri ava vayambirwa kuti varambe vachigara padzimba dzavakanyoresa kumapurisa uye kuti vasakanganise zvapupu kudzimara nyaya iyi yapera kutongwa. VaMadiro vacharamba vagere papurazi ravo re Newton ku Odzi ukuwo Amai Mabika vachange vari papurazi ravo re-shiriyakangwara ku-Mt Selinda kuChipinge.
Amai Mabika vakatarisanawo nedzimwe mhosva mbiri dzekuba mombe uye imwe yekukanganisa mafambiro ekutongwa kana kuenzaniswa kwemhosva vanzi vabvise imwe mari sechibatiso inoita zana nemakumi mashanu emadhora.
Pane imwe mhosva iyi, Amai Mabika vanonzi vakapihwa mhuru nhanhatu kuti vazopa veku-Inter District kuZanu-PF, asi vanonzi havana kusvitsa mombe idzi. Mombe idzi dzinonzi dzainge dzapihwa bato reZanu-PF nemurimi wechichena Dawid Hercules Jourbert musi wa 7 Gunyana.
Muchuchisi wehurumende pamhosva iyi Amai Christine Nyamamaropa vanoti Amai Mabika vakashandisa vashandi ve-zanu pf provincial office kuti vashandure maminitsi emusangano wakaitwa musi wa-21 mMbudzi wegore ra-2011 kuti ati mhuru nhanhatu idzi dzainge dzafa nekuda kwekushaya chikafu uye nemukaka wakakwana.
Vachuchisi vehurumende vaudza dare kuti izvi zvakaitwa nechinangwa chekuda kuti zvipfuyo izvi zvitsakatike, uye izvi zvinonzi zvakaitika apo matikitivha anga otanga kuferefeta nyaya iyi.
Amai Mabika vanonzi vakaita izvi vachishandisa vashandi vekumahofisi e-zanu vanosanganisira amai angawashe nelia maenda pamwechete na Lucia Golowa pamhosva iyi vachuchisi vehurumende vaudza dare kuti vadaidza zvapupu zvinosvika gumi nezvishanu apo mhosva iyi ichatanga kutongwa musi wa 2 Chivabvu gore rino.
Amai Mabika vange vachitaridza kushushikana nezvange zvichiitika mudare sezvo vange vari kungozamura nguva dzose ukuwo vamadiro vange vachiedza nepavaigona napo kuzvitsigisa.
Mudare mange muzere nevanhu kunyanya vatsigiri ve Zanu-PF, vasori uye vatori venhau izvo zvapa kuti vamwe vanhu vashaye pekugara. Vamwe vange vari kuterera zvange zvichiitika mudare vari panze.